မနက်ဖြန်ကစ ရန်ကုန်တွင် Mask မတပ်ပါက အရေးယူပြီ ..( ရန်ကုန်ရေ ညီညွတ်ကြောင်းပြကြ ပါစို့….) – Na Pann San
မနက်ဖြန်ကစ ရန်ကုန်တွင် Mask မတပ်ပါက အရေးယူပြီ ..( ရန်ကုန်ရေ ညီညွတ်ကြောင်းပြကြ ပါစို့….)
တမျိုးသားလုံး ရဲ့ ကျန်းမာရေး အတွက် ရန်ကု န်သားတွေ စည်းကမ်း ရှိကြောင်း ပြကြပါ… ( ရန်ကု န်တွင် မေ ၁၃ မှစ ၍ Mask မတပ်လျှင် အရေးယူ မည် )
COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ် ၊ ထိန်းချုပ် ၊ ကန့်သတ်သွားလာ နိုင်ရေးအတွက် နေအိမ်မှ အပြင်ထွက်တိုင်း နှာခေါင်းစည်း( Mask ) တပ်ရန် အပါအဝင် ပြည်သူလူထု လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ကြေညာ ချက်ကို ရန်ကုန်တိုင်း ရှိမြို့နယ် COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အရေးပေါ် တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီ များ က မေလ ၁၁ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန် သည် ။…
မနက်ဖြန်ကစ ရန်ကုန်တွင် Mask မတပ်ပါက အရေးယူပြီ ..
COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကန့်သတ်သွားလာ နိုင်ရေးအတွက် နေအိမ်မှ အပြင်ထွက်တိုင်း နှာခေါင်းစည်း(Mask)တပ်ရန်အပါအဝင် ပြည်သူလူထု လိုက်နာဆောင်ရွက်ရ န်ကြေညာ ချက်ကို ရန်ကုန်တိုင်းရှိမြို့နယ် COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အရေးပေါ် တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီများက မေလ ၁၁ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်သည်။
နေအိမ်မှ အပြင် သို့ ထွက်ခွာ သွားလာတိုင်း ပါးစပ်၊ နှာခေါင်းစည်း (Mask) တပ်ဆင်ရန်နှင့် လူငါးဦးဖြစ်စေ၊ ငါးဦးထက်ပို၍ ဖြစ်စေ စုဝေး ခြင်းမပြုရန်(ခြွင်းချက်များဖြင့်) ကြေညာချက် ၌ ဖော်ပြထားပြီး ယင်း ကြေညာချက်မှာ မေလ ၁၃ ကစတင်၍ နောက်ထပ် အမိန့်တစ်စုံတစ်ရာ ထုတ်ပြန်ခြင်း မပြုမီကာလအထိ အတည်ဖြစ် သည် ဟု ဆိုသည် ။
ယင်းစည်းကမ်းသတ်မှတ် ချက်များ မှာ ရန်ကုန်တိုင်း အတွင်းရှိ အများပြည်သူအကျိုးအတွက် ရည်ရွယ်သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သဖြင့် တိကျ စွာ လိုက်နာရန်နှင့် လိုက်နာခြင်းမရှိပါက ကူးစက်ရောဂါများ ကာကွယ် နှိမ်နင်းရေးဥပဒေနှင့် အညီ အရေးယူခြင်းခံရ မည် ဟု ကြေညာချက် ၌ ဆက်လက်ဖော်ပြသည် ။
‘‘ညနေက မိုက်နဲ့လိုက်အော်နေတာတွေ့တယ် ။ အဓိက Mask တပ်ဖို့ပဲ ။
ကျန်ညွှန်ကြားချက် က တော့ အရင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေ မှာ ပါတာ နဲ့ သိပ်မကွာဘူးထင်တယ်’’ ဟု လှိုင်မြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦး ကျော်ကျော်ထွန်းက ပြောသည် ။
လူငါးဦးနှင့် ငါးဦးနှင့် အ ထက် စုဝေးနိုင်မည့် ခြွင်းချက်ပေး ထားသော အချက် ၁၀ ချက် ပါဝင်ပြီး အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် လုပ်ငန်းခွင်သို့ သွားရောက်ခြင်း ၊ လုပ်ငန်းခွင်မှ ပြန်ခြင်း ၊ ကုမ္ပဏီ၊ စက်ရုံ ၊ အလုပ် ရုံများ တွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် လုပ်ငန်းခွင် သို့ သွားရောက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်မှပြန်ခြင်း တို့ ပါဝင် သည်။
မရှိမဖြစ် လိုအပ်သည့် လုပ် ငန်းများ၊ အများပြည်သူဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် အ များပြည်သူအတွက် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် တာဝန်ထမ်း ဆောင်ရန် လုပ်ငန်းခွင် သို့ သွား ရောက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်မှပြန် ခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသော ဈေး၊ ကုန်တိုက်များ တွင် ဈေး ရောင်း၊ ဈေးဝယ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ခွင့် ပြုချက်ရရှိထားသော ကုန်စည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဆောင်ရွက် ခြင်းများလည်း ခြွင်းချက်၌ ပါဝင် သည် ။
ထို့အပြင် တရား စီရင်ရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက် ခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက်နှင့်အညီ COVID-19 ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးလုပ် ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အရေး ပေါ်ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများ နှင့် အရေးကိစ္စရပ်များ ဆောင် ရွက်ခြင်းတို့လည်း ပါဝင်သည် ။
ကျန်ပါဝင် သည့် အချက်နှစ် ချက်မှာ ကျန်းမာရေးနှင့်စပ်လျဉ်း ၍ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းသို့ သွား ရောက်ခြင်းနှင့် နာရေးကိစ္စဆောင် ရွက်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
သို့ ရာ တွင် ယင်းခြွင်းချက် များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စရပ် ရပ်များတွင် သတ်မှတ်ဦး ရေထက် ပိုမိုရန်ရှိလျှင်ဖြစ်စေ၊ အခြားအ ရေးပေါ်ကိစ္စရပ်များ အတွက်သွား လာရန်ရှိလျှင်ဖြစ်စေ သက်ဆိုင် ရာ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့သို့ သတင်းပို့ကာ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သွား လာရန်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာချက် ၌ ဖော်ပြသည် ။7Day
မြန်မာ ( ၂၈ ) ဦးထိ ကူးစက်ခံလာရပြီဖြစ်တဲ့ စကာင်္ပူနိုင်ငံ နှင့် ကမ္ဘာတဝန်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် နောက်ဆုံးရသတင်းများ
ယခုနှစ် ….မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၈၂ )—–ခရစ်နှစ် (၂၀၂၀) ခုနှစ် အတွက် သင်္ကြန်စာ
၂ ရက်အတွင်း ထိုင်းပြည်တော်ပြန်ပေါင်း ( ၂၀၀၀ ) ကျော် အလုံးအရင်းဝင်ရောက်မှု အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောပြီ